Abidjan Blog Camps: Navotsotra i Théophile Kouamouo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2018 13:26 GMT
(Marihina fa tamin'ny 12 Aogositra 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Stéphane Guédé, Théophile Kouamouo ary Saint Clavier Oula, ireo mpanao gazety voatazona. Sary natolotr'i Richman.
Feno hatezerana sy ahiahy ny tontolon'ny bilaogy Afrikana rehefa nosamborina niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny gazety Ivoriana mpivoaka isan'andro Le Nouveau Courrier i Théophile Kouamouo. Nampiasa bilaogin-dahatsoratra sy vondrona Facebook hanavaozam-baovao farany sy hanaparitahana ny vaovao ho an'izao tontolo izao ireo bilaogera Ivoriana toa an'i Manasse Dehe. Nomelohina ihany koa i Théophile, tompon'andraikitry ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices Abidjan Blog camps noho ny tsy nilazany ny loharanom-baovao nahazoany ny tatitra tafaporitsaka navoaka tao amin'ny Le Nouveau Courrier izay nanoritsoritra ny fanodikodinam-bola avo lenta tao amin'ny sehatry ny kakao-kafe tao Côte d'Ivoire.
Navotsotra ny 26 Jolay 2010 ireo mpanao gazety miisa telo rehefa notanana tany am-ponja nandritra ny tapabolana. Toy izao ny tatitra avy amin'i Richman :
Niteny ny lalàna. Nomelohin'ny Fitsaràna ireo mpanao gazety handoa onitra mitentina 5.000.000 CFA (eo ho eo amin'ny 10.000 $ Amerikana eo) ary navotsotra izy ireo. Famaizana izy ity mihoatra ny lalànan-gazety fa tsy miditra amin'ny raharahan-keloka bevava izay nampidiran'ny mpampanoa lalàna anay, niteraka rikoriko sy nahatohina izao tontolo izao. Namerina amin'ny laoniny ilay mety hanimba ny hafa ny fitsarana Ivoariana.
Ankoatra ireo mpanao gazety miisa telo avy ao amin'ny Le Nouveau Courrier dia navotsotra ireo voampanga roa hafa akaiky ny mpampanoa lalàna (ny mpitan-tsoratra sy ny mpanolotsainy). Tsy voamarina ny halatra, ny tsara indrindra navoakan'ny fitsarana dia ny tsy fametrahana fepetra fiarovana amin'ny solosaina ao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna, toy ny dosie sokajiana ho tsiambaratelo izay tsy misy fiarovana araka ny tokony ho izy.
Théophile Kouamouo sy Saint-Clavier Oula niresaka tamin'ny mpanao gazety taorian'ny famotsorana azy ireo. Sary natolotr'i Richman
Niteny i John Henry Kwahulé ao amin'ny gazetiboky Nouvelle Afrique fa i Côte d'Ivoire no firenena tokana eto amin'izao tontolo izao managadra mpanao gazety noho ny famoahana vaovao marina. Hoy izy:
Nahatonga ny fahadisoana roa sosona ho an'ireo mpiara-miasa ity didim-pitsarana ity. Noho izany, rehefa noesorim-pahafahana nandritra ny tapa-bolana dia tsy hivoaka mandritra ny tapa-bolana ihany koa ny gazetin'izy ireo. Tsy rariny izany. Fa nahoana izy ireo no nogadraina?
Nitatitra momba ny fanohanana iraisam-pirenena ho an'i Théophile sy ireo mpiara-miasa aminy i Tim Newman ao amin'ny Change.org :
Mpikatroka miisa 1.150 mahery ao amin'ny Change.org no nanoratra tany amin'ny Filoham-pirenena Ivoariana Laurent Gbagbo sy ny Masoivohon'i Etazonia ao Abidjan mba hampahafantatra azy ireo momba ny ahiahiny mikasika ity fanafihana atao amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ity. Ny herinandro lasa teo, namoaka fanambarana naneho ny ahiahiny ho setrin'izany ny Masoivoho Amerikana ary nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Nisaotra ireo bilaogera namany noho ny fanohanana sy ny fikatrohana i Théophile Kouamouo:
Mijery ny tranonkala aho, ary hitako ny fanohanana sy ny fikatrohana mahavariana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy, ankoatra ny fampitàna mandeha ho azy fa “klasika” ny gazety. Misy ny tontolon'ny bilaogy ary mety ho tonga nofo izany, mihoatra noho ilay eritreritsika izay “natoraka” ao amin'ny tranonkala. Tsy hitako ny teny mety hilazana ny fankasitrahako anareo rehetra. Mahatsapa andraikitra lehibe lanjaiko eto an-tsoroko aho. Manana adidy amin'ny tsara kokoa aho, hijery kokoa momba ny tombotsoan'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fomba hanatanterahako ny asa fanaovan-gazety, ho mendrika ny fanentanana izay nataonareo.